Walter Generator Mametraka
Walter manokana amin'ny famokarana Diesel Generator Generator ho an'ny tany sy ny ranomasina. Marika maotera an'ny: Cummins, Perkins, Volvo, MTU, Daewoo, Deutz, Brand Domestic: Yuchai, SDEC, Weichai ...
Mametraka karazana Generator Cummins Silent
Mametraka Generator Generator misokatra
Mametraka karazana Generator Perkins mangina
Product Scope Sy Applicaton
Walter Generator Sets dia azo ampiasaina amin'ny indostrialy, varotra, fananganana, fanamafisam-peo, tobim-pifandraisana, tafika, hopitaly, harena ankibon'ny tany, seranam-piaramanidina sy toerana maro hafa.
60HZ 570kva mpamokatra diesel Perkins
60HZ 440kva mpamokatra diesel Perkins
60HZ 1250kva mpamokatra diesel Perkins
WALTER GROUP FROemium
Walter amin'ny famokarana setara mpamokatra gazoala, manana traikefa amin'ny famokarana manan-karena isika. Walter factory dia bulit tamin'ny 2003, manampahaizana manokana momba ny mpamokatra herinaratra napetraka nandritra ny 16 taona izahay. Walter dia mpiara-miasa OEM an'ny Perkins, Cummins, Doosan, MTU, Volvo ary sns, ary ny herinaratra dia manomboka amin'ny 5kw-3000kw.
Ny orinasa Walter dia any Yangzhou, faritanin'i Jiangsu, Sina. Ny faritry ny orinasa dia mihoatra ny 2500 metatra toradroa ary fitaovana miaraka amin'ny fitaovana mandroso ao anatin'izany ny milina fanapahana laser, milina fanapoahana CNC ..
Target Walter: Mametraka ekipa fanavaozana vaovao sy ekipa fianarana, hanomezana vokatra sy serivisy matihanina ho an'ireo mpanjifa manerantany.
Ireo fampiharana ho an'ny Sies Generator an'ny Diesel anay. Eto ianao dia hahita galerin-tsary sy horonan-tsary hahitana aingam-panahy amin'ny asa manaraka.